युट्युबले हटायो ५ करोड बढी भिडियो, कस्ता-कस्ता भिडियो हट्यो ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
युट्युबले हटायो ५ करोड बढी भिडियो, कस्ता-कस्ता भिडियो हट्यो ?
एजेन्सी । युट्युबले आफ्नो नियम पालना नगरेको जनाउँदै लाखौं भिडियोहरू आफ्नो वेब साइटबाट हटाएको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यस्थित स्यान बुर्नोमा मुख्यालय रहेको युट्यूबले गत जुलाई र सेप्टेम्बर महिनामा गरेको आन्तरिक ‘अडिट’ पश्च्यात ५ करोड ८० लाख भिडियोहरूलाई कम्पनीको सीमारेखा भित्र नरही ’अपलोड’ गरिएको पाइएकोले हटाएको जनाएको छ ।
कम्पनीको आधिकारिक ब्लगमा जनाइएअनुसार भिडियोका साथ साथै झन्डै २३ करोड ‘कमेन्ट’ हरू समेत यूट्यूबबाट हटाइएको जनाइएको छ । यूट्यूबका प्रयोकर्तालाई विभिन्न ठगी स्किमहरूबाट जोगाउन र सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्नका लागी उक्त कदम चालिएको ब्लगमा उल्लेख छ ।
गुगलको आधिपत्य रहेको युट्युबले २०१७ देखि प्रविधि र मानव श्रोतको प्रयोग गर्दै आफ्नो अनुसाशनभन्दा बाहिर रहेका सामग्रीहरूलाई हटाउन शुरुवात गरेको थियो । झण्डै १० हजार कर्मचारीहरूले दैनिक रूपमा यूट्यूबमा अपलोड हुने सामाग्रीको निगरानी गर्ने गरेका छन् ।
मानव बेचबिखन विरुद्धको ११ औं राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै
भदौं २०, काठमाडौं। ‘अवको गन्तव्य, मानब बेचबिखनको अन्त्य’ भन्ने मूल नाराका साथ मानव बेचबिखन विरुद्धको ११ औं […]
पाँच वर्षीय बालकको अपहरणपछि हत्या,फुपूका छोरा हत्यामा संलग्न
रुपन्देही,स्कुल जाँदै गर्दा अपहरणमा परेका बोगडी–४ का पाँच वर्षीय रोहन नाउको हत्या गरिएको अवस्थामा फेला […]
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलिया सरकारले नागरिकता सम्बन्धि नितीलाई कडाई गरेरै छाड्ने तयारी थालेको छ । योग्यता […]
को–को छन् नेकपाको एकीकरण कार्यदलमा ?
काठमाडौं । प्रदेश १ : भीम आचार्य, राम कार्की, शेरधन राई र सावित्रीकुमार काफ्ले प्रदेश २ : सत्यनारायण […]
यसरी हुँदैछ राष्ट्रियसभा चुनाव,यस्तो छ निर्वाचन तालिका
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले माघ २४ मा […]